SIDA LOO DEJIYO XIDHIIDHKA KOMBIYUUTARKA FOG EE WINDOWS 10 - JILICSAN
Sida loo Dejiyo Xidhiidhka Kombiyuutarka Fog ee Windows 10
Xidhiidhka Desktop Fog waa muuqaal Microsoft Windows ah oo u oggolaanaya isticmaaleyaasha inay ku xakameeyaan kumbuyuutarka fog ee shabakadda. Tan waxaa lagu sameeyaa Protocol-ka fog fog (RDP), oo ah hab-maamuuska isgaarsiinta shabakad sugan oo ka caawiya maareynta fog. Maya, software qolo saddexaad ayaa loo baahan yahay si kombuyuutarku uga galo xidhiidh fog. Si kastaba ha ahaatee, waxaad weli u baahan doontaa inaad awood u siiso RDP labada kombiyuutarada, maadaama default ay naafo tahay Windows oo hubi in labadaba Kombiyuutarada ay ku xiran yihiin internetka.
Hadda Windows 10 Isticmaalayaasha noocyada guriga ma martigelin karaan isku xirka RDP shabakad, laakiin wali waxay haystaan ​​xoriyada ay ku xidhaan Xidhiidhada Mashiinka Fog. Markaa annagoon wax wakhti lumin aan aragno sida loo dejiyo isku xirka Desktop Fog ee Windows 10 iyadoo la kaashanayo hagaha cilad-raadinta ee hoos ku taxan.
Habka - 1: U yeel Desktop Fog ee Windows 10 Pro
Habka – 2: Sida loogu xidho kombayutarkaga adiga oo isticmaalaya Connection Desktop Fog
Habka - 3: Sida loogu xidho kombiyuutarkaaga adoo isticmaalaya App-ka fog ee Desktop
Habka - 4: Sida loogu sahlo RDP Windows 10 Noocyada Guriga
Hubi inaad abuur dhibic soo celin waaba haddii ay wax qaldamaan.
Fiiro gaar ah: On Windows 10 Daabacaada Guriga tani ma shaqaynayso.
1. Riix Windows Key + Q si aad u soo qaadato Windows Search, ku qor meel fog laga galo oo guji Oggolow meel fog laga galo kombiyuutarkaaga.
2. Hoosta Matoorka fog, iska hubi inaad calaamadiso Oggolow ku xidhidhyada fog kombayutarkan .
3. Sidoo kale, calaamadee sanduuqa ku qoran Oggolow isku xidhka kaliya ee kombayuutarrada ku shaqeeya Desktop Remote oo leh Xaqiijinta Heerka Shabakadda(la taliyay) .
4. Guji Codso, oo ay ku xigto OK
1. Riix Windows Key + R ka dibna ku qor mstsc oo ku dhufo Enter si aad u furto Isku xirka Desktop Fog
2. Shaashada xigta ku qor magaca kombiyuutarka ama cinwaanka IP-ga PC-ga aad geli doonto oo guji Ku xidhnow.
3. Marka xigta, ku qor username-ka iyo erayga sirta ah ee PC-gaaga oo ku dhufo Enter.
Fiiro gaar ah: Haddii kombuyutarka aad ku xidhi doonto aanu lahayn habayn sirta ah, ma awoodid inaad ka gasho RDP.
mid. Tag linkigan dabadeed dhagsii Open Store Store.
2. Guji Hel si aad u rakibto Abka Desktop Fog .
3. Marka rakibidda la dhammeeyo, bilow app-ka.
4. Marka xigta, ka sare ka dhagsii badhanka Add, ka dibna dooro Desktop. Ku qor magaca PC-ga ama cinwaanka IP-ga ee kombiyuutarka waxaad gali doontaa oo guji Ku xidhnow.
5. Ku qor username iyo password PC-gaaga oo ku dhufo Enter.
6. Haddii aad hesho digniin ammaan, calaamadee Mar dambe ha i waydiin xidhiidhada kombuyutarkan oo guji Connect si kastaba.
7. Taasi waa, hadda waxaad bilaabi kartaa isticmaalka kombiyuutarka fog.
Si aad ugu suurtageliso RDP Windows 10 Nooca Guriga, waxaad u baahan tahay soo deji app dhinac saddexaad ah oo lagu magacaabo RDP Wrapper Library . Ka saar waxa ku jira faylka zip-ka ee la soo dejiyay ka dibna ka orod RDPWinst.exe, ka dibna orod Ku rakib.bat. Hadda ka dib laba-guji RDPConf.exe oo waxaad awoodi doontaa inaad si fudud u habayn karto RDP.
Sida loo beddelo Tilmaamaha Mouse gudaha Windows 10
Hagaaji Searchindexer.exe Isticmaalka Sare ee CPU
Sida loo suurtageliyo AHCI Mode gudaha Windows 10
Hagaaji winload.efi qaladka maqan ama musuqmaasuqa
Taasi waa waxa aad si guul leh u baratay Sida loo Dejiyo Xidhiidhka Kombiyuutarka Fog ee Windows 10 laakiin haddii aad wali hayso wax su'aalo ah oo ku saabsan boostada markaa waxaad xor u tahay inaad ku weydiiso qaybta faallooyinka.